संस्कारी बन्ने ठेक्का छोरीको मात्रै हो महाशय ? « Postpati – News For All
संस्कारी बन्ने ठेक्का छोरीको मात्रै हो महाशय ?
‘काम ठीकठाक चलिरा’छ, घरतिरको पनि सबै ठिक छ। उम्म्म् … त्यै हो घरमा बिहेको कुरा भइरा’छ, यसपालि बढी नै सम्भावना छ।’
‘मान्छे खास नराम्री त होइन, ठिकै लाग्यो। तर …’
उसको कुराले दिमाग घुमिरहेकै थियो। ल्यापटप बन्द गरें र सोंच्न थालें, साँच्चै यो सँस्कार भनेको के हो? जुन महिलाले मात्रै सिक्नुपर्ने, महिलामा मात्रै हुनुपर्ने, महिलामा मात्रै खोजिने। पुरुषले सँस्कार सिक्नुपर्दैन? के सँस्कार महिलाका लागि मात्रै हो भनेर छुट्याइएको छ? थुप्रै प्रश्नहरु उब्जियो मनमा। नजिकै रहेको शब्दकोश पल्टाएँ र खोज्न थालें ‘सँस्कार’ को अर्थ …
मेरो साथी नबिन त एउटा पात्रमात्रै हो, उसले भनेका कुराले हाम्रो समाज कस्तो छ भन्ने कुरा देखाउँछ। बिवाहका लागि केटी हेर्न जाने अभिभावकले केटीले लगाएको पहिरनदेखि बनाएको खान्की र हिंडाइसम्मको टिप्पणी गर्छन्। भात गिलो छ कि साह्रो छ, दालमा नुन लागेको छ कि छैन, तरकारीमा हालेको मसला मसिनो भयोे कि छोक्रै बस्यो, जिउ सिधा बनाएर हिंडी कि कोल्टे, टाउकोमा सल हालेकी छ कि छैन, कुर्ता लगाएकी छ कि पाइन्ट, पानी दिंदा एक हातले दिइ कि दुई हातले, दाइने हातले दिइ कि देब्रे हातले, चियामा चिनी कस्तो छ, बोल्दा निहुँरिएर बोलि कि सिधा हेरेर … आदि।
विवाह पार्टीमा जाँदा चिटिक्क मिलाएर साडी लगाउन जान्नुपर्ने, लिपिस्टिक–गाजल मिलाएर सुन्दरी हुनुपर्ने, थ्रेडिङ गर्न र कपाल रोलिङ गर्न पनि उत्तिकै सिपालु बन्नुपर्ने, उस्तै सुन्दर ढंगले हातमा मेहेन्दी लगाउन सिक्नुपर्ने, पुजामा जाँदा नबाङ्गीएका सेलरोटी र अमिलो पिरो चट्ट परेको अचार बनाउन जान्नुपर्ने, टल्किने गरी भाँडा माझ्न र चुलो पोत्न आउनुपर्ने, सपिङ गर्न जाँदा सामानका मूल्यहरु बढी नपर्नेगरी तोक्न जान्नुपर्ने, सासु, ससुरा, आमा, बुवा, दाजु, भाइ, नन्द, आमाजु, देवर, जेठाजु, देवरानी, जेठानी, भान्जा, भान्जी, फूपु सासु, … कसलाई कस्तो कलर सुहाँउछ र राम्रो हुन्छ भनेर छनौट गर्न सक्नुपर्ने, सुनपसल पुग्दा गहनाका ढिजाइनहरु खरररर भन्न सक्नुपर्ने, तरकारी बजार पुग्दा नबिग्रिएका ताजा तरकारी सुपथ मूल्यमा किन्न सक्नुपर्ने, धार बस्नेगरी कपडामा आइरन लगाउन जान्नुपर्ने, कोठाहरु चिटिक्क सजाएर राख्नुपर्ने, बच्चाहरुलाई मनपर्ने टिफिन बनाएर हालिदिनुपर्ने, श्रीमानको कोट र जुत्ता ठिकठाक छ कि छैन चेक गरिदिनुपर्ने, गमलाका फूलहरु सुक्न लागे कि पानी हाल्नुपर्ने, तीजमा चौरासी व्यञ्जन तयार गरी मिठो दर खुवाउनुपर्ने, दशैंमा मिठो मात्रै होइन स्वस्थ मासु पकाउन जान्नुपर्ने, अनि ति भाँडाहरुमा चिल्लो दाग नरहनेगरी माझ्न जान्नुपर्ने, तिहारमा चारैतिरबाट आँगनलाई सिङगारेर दुरुस्तै लक्ष्मीको जस्तै पाइला बनाएर पुजा कोठासम्म पुर्याउन जान्नुपर्ने, सेलरोटी, पत्रे, अनरसा, खजुरी, ठेकुरा, भूसुवा बनाएर सबैलाई कोशेली पठाउन सक्नुपर्ने, बच्चालाई तेल घस्न र डाइपर फेर्न पनि उत्तिकै सिपालु हुनुपर्ने, परिवारमा कसलाई कुन रोग छ, त्यसको औषधी र खाने समय सम्झाउन भ्याउनुपर्ने, … यतिमा मात्रै सकिंदैन नि जीन्दगी!
प्रकाशित १६ पुस २०७४, शनिबार
गीता चिमोरिया/नेपालखबरबाट साभार